ကျန်ရှိနေသည့် မြန်မာ - ထိုင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ် စည်းသတ်မှတ်မှု သဘောတူညီ စာချွန်လွှာ မကြ? - Yangon Media Group
ကျန်ရှိနေသည့် မြန်မာ-ထိုင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်စည်းသတ်မှတ်မှုသဘောတူ ညီစာချွန်လွှာကို မကြာမီလက် မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက မေ ၃၁ ရက်က ပြောသည်။ မေ ၃၁ ရက်က နေပြည် တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယတစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာန၏ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းသို့ပြောခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်သူက ”မြန်မာနယ်စပ်နယ်နိမိတ်တိုင်း တာရန်ကျန်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ-ထိုင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် သတ်မှတ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး အဆင့် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲနယ်နမိတ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကွင်း ဆင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် မေလကုန်နှင့် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတို့မှာ နယ်နိမိတ်စည်းသတ် မှတ်မှုသဘောတူညီစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို အပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နယ်နိမိတ်မသတ်မှတ်ရသေးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ် တာပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းက လုံခြုံရေး အရမလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုငြိမ်း ချမ်းရေးလည်းရလာပြီ နယ်စပ် ဒေသလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လုပ် ဆောင်ပါမယ်။ အိန္ဒိယနဲ့က လက် ရှိနှစ်ဖက်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ဒီလကုန်မှာအားလုံး ပြီးပါမယ်။ လာမယ့် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လမှာ မြေတိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိပါမယ်။ ဒီနယ်နိမိတ်လိုင်းကို လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပြီးရင် အိန္ဒိယနဲ့ အား လုံးပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိနယ်နိမိတ်စည်းသတ်မှတ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လာအိုနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး နယ်နိမိတ် စည်းသတ်မှတ်မှုသဘောတူညီစာ ချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသာကျန်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်သူက ”လာအိုနိုင်ငံနဲ့ကဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်နေတာက အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းပါ။ တရုတ်ကတော့ ၁၉၅၉-၁၉၆၁ ခုနှစ်ထဲကပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုဒုတိယအကြိမ်ကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးပြီး ၁ဝ နှစ်ကျော်ကြာသွားပါပြီ။ အခုတတိယအကြိမ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဖို့ ရာသီဥတု ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တော ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကြောင့်သော်လည်း ကောင်းနယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်နေရာ ရွေ့တာတွေ၊ မှတ်တိုင်ပြိုကျတာ တွေ ပြန်လည်စိစစ်ပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် မပြီးပြတ်သေးသည့်နယ်နိမိတ်ကိစ္စများပြီးပြတ် အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ နောင်လာ နောင်သားများအတွက် ကောင်းမွန်သောအမွေအနှစ်များပေးအပ်သွားနိုင်ရန်အတွက် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ထားရှိပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာမှုကိစ္စ ရပ်များကိုဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယ- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသော ဦးမောင် ဝေအား နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကုန်းနယ်နိမိတ်၊ ရေနယ်နမိတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
အာနန္ဒ စန္ဒြကျောက်စာနှင့် မြဂနိုင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတို့ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ အဆင့် မှတ်တမ်းအမွေအန??